धतुरेको ५०० पेजको किताब - E Net Nepal
Home Jokes धतुरेको ५०० पेजको किताब
धतुरेको ५०० पेजको किताब
E NET NEPAL 11:06 PM Jokes,
एकपटक पागल धतुरे, डाक्टर चतुरेलाई भेट्न मोटो किताबजस्तो केहि लिएर आयो । यो देखेर डाक्टर चतुरेले पागल धतुरेलाई सोध्यो,
चतुरे :- यो के हो ?
धतुरे : यो मैले लेखेको ५०० पेज को किताब हो ।
चतुरे : ५०० पेजको के लेखिस त्येस्तो ?
धतुरे : पहिलो पेजमा १ राजा घोडा चडेर जंगल गएछ । अनि, लास्ट पेजमा राजा जंगल पुगेछ ।
चतुरे : तेसो भए बिचको पेजमा के लेखिस त ?
पागल : टुक्डुक.. टुक्डुक.. टुक्डुक.. टुक्डुक.. टुक्डुक.. टुक्डुक.. टुक्डुक.. टुक्डुक.. टुक्डुक.. टुक्डुक.. टुक्डुक.. टुक्डुक.. टुक्डुक.. टुक्डुक.. टुक्डुक.. टुक्डुक.. टुक्डुक.. टुक्डुक.. टुक्डुक.. टुक्डुक.. टुक्डुक.. टुक्डुक.. टुक्डुक.. टुक्डुक.. टुक्डुक.. टुक्डुक.. टुक्डुक.. टुक्डुक.. टुक्डुक.. टुक्डुक.. टुक्डुक.. टुक्डुक.. टुक्डुक.. टुक्डुक.. टुक्डुक.. .............